Erik Ten Hag Oo U Sheegay Labo Ka Mid Ah Daafacyada Ugu Muhiimsan Man United Inay Albaabka Old Trafford Ka Baxaan Xagaagan - Laacib
HomeWararka CiyaarahaErik Ten Hag Oo U Sheegay Labo Ka Mid Ah Daafacyada Ugu Muhiimsan Man United Inay Albaabka Old Trafford Ka Baxaan Xagaagan
Erik Ten Hag Oo U Sheegay Labo Ka Mid Ah Daafacyada Ugu Muhiimsan Man United Inay Albaabka Old Trafford Ka Baxaan Xagaagan
Manchester United ayaa u ogolaan doonta Aaron Wan-Bissaka iyo Eric Bailly inay kooxda ka tagaan xagaagan iyadoo tababare Erik ten Hag uu go’aansaday inuusan u baahneyn labadaan daafac.
Wan-Bissaka iyo Bailly qeyb kama ahan qorshaha dib u dhiska Ten Hag, iyadoo Manchester United ay rajeyneyso inay labadaan daafac si joogta ah isaga iibiso xagaagan.
Inkastoo aysan diidi doonin inay heshiis amaah ah ku baxaan hadana Man United waxay raacin doontaa sharuud ah in heshiiska amaahda ka dib la iibsado xiddigaan sida ay sheegeen Sky Sports iyo Fabrizio Romano.
Wan-Bissaka oo Old Trafford kaga soo biiray Crystal Palace heshiis 45 milyan ginni ahaa ayaa booskiisa u waayay Diogo Dalot ka dib markii Ralf Rangnick tababare looga dhigay kooxda.
Si kastaba, wuxuu boos joogta ah heystay waqtigii Ole Gunnar Solskjaer isagoo ciyaaray 35 kulan oo Premier League ah xilli ciyaareedkiisii ugu horeysay ee kooxda halka uu 34 kulan oo horyaalka ah dheelay xilli ciyaareedkii ku xigay.
Crystal Palace ayaa la sheegayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqo ciyaaryahankeedii hore xagaagan.
Dhanka kale Eric Bailly ayaa ciyaaray kaliya todoba kulan tartamada oo dhan xilli ciyaareedkii la soo dhaafay oo dhaawacyo ay wareeriyeen.
Xiddiga reer Ivory Coast ayaa Man United joogay tan iyo 2016kii, iyadoo 28 jirkaan loo arkay inuu dheeri ku yahay xiddigaha laga rabo Old Traford.
Qorshaha dib u dhiska Man United waxaa sidoo kale ka mid ah inuu xiddigo cusub keeno sida Frenkie De Jong iyo Lisandro Martinez.